Barar, qaybo mawjadaha iyo hirarka waaweyn | Saadaasha Shabakadda
Markaad ka fikirto badda iyo badaha, waxaad isla markiiba ka fikireysaa dhawaqa ay mowjaduhu sameeyaan. Waxay noqon laheyd wax aan macquul aheyn in la qiyaaso xeebta bilaa hirarka. Intii aan yarayn waxay na barayaan in mowjaduhu ku jiraan wax soo saar joogto ah iyo burbur iyo inay yihiin tamar ka gudubta badda dusheeda.
Maanta waxaan ogaan doonnaa wax kasta oo la xiriira barar, qaybaha mawjadaha iyo hirarka waaweyn ka diiwaan gashan adduunka oo dhan. Ma dooneysaa inaad wax badan ka ogaato howlaha badda iyo badaha.
1 Astaamaha hirka
2 Meelaha bararku ka dhaco
3 Qaybo ka mid ah mowjadaha
3.1 Weli khad biyood
3.2 Crest ee mawjadda
4 Mawjadaha waaweyn
Sida horeyba loo ogaa, dabayshu waxay mas'uul ka tahay jiilka hirarka socda ee ku wareegaya dusha sare ee biyaha badaha iyo badaha isla markaana door muhiima ka ciyaara nolosha badda. Intaa waxaa dheer, mowjadaha waxay u saameeyaan hab muhiim ah wax ka beddelka aagagga xeebta. Waxay kuxirantahay nooca bararka xeebta, waxay qaadan doontaa hal qaab ama mid kale.
Mawjadaha waxay u kala baxaan dhowr nooc oo ku xiran meesha iyo sida ay u dhisan yihiin. Midka koowaad waa mawjado biyo ah oo qoto dheer oo laga soo saaro meelaha ay baddu aad u hooseyso oo aan wax saameyn ah ku yeelan jiilka iyo dhaqdhaqaaqa mawjadaha. Dhinaca kale, waxaan leenahay hirarka xeebta kuwaas oo ay saamayn ku leeyihiin qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka badda maadama uu leeyahay qoto-dheer.
Mowjadaha waa dhaqdhaqaaqyo mowjado ah, oscillation xilliyeedka dusha sare ee badda, oo ay sameeyeen ciriiriyo iyo niyad jab u socda si tartiib tartiib ah. Waxaa badanaa lagu gartaa iyaga dhererka, mudada, jiirada, dhererka, baaxadda, iyo xawaaraha faafinta.
Mawjadaha ayaa ah kuwo aad u isbedbeddel badan oo aan awood u yeelan karin inay falanqeeyaan oo ay sharraxaan. Sidaa darteed, hababka tirakoobka ayaa loo adeegsadaa. Mowjadaha biyaha ee qoto dheer waxay abuuraan dhaqdhaqaaq joogto ah oo ka yar ama ka yar dusha sare ee badaha iyo badaha oo aan ugu yeerno barar kaas oo dhererka mowjaddu uu aad u hooseeyo marka loo eego dhererka hirarka. Bararku wuxuu ku faafaa badweynta, isagoo gaarayaa meelo aad uga fog asalka.
Meelaha bararku ka dhaco
Meelaha ugu waaweyn ee mawjadaha laga kacaa waa meelaha dabaylo ayaa ka imanaya galbeedka aagagga heerkulka labada cirif. Gobolladaas ka baxsan, waxaa jira oo keliya hal aag muhiim ah oo leh abuur abuur. Waa Badda Carbeed. Aaggan, inta lagu jiro bilaha Juun, Julaay iyo Ogast, waxaa jira barar xoog leh oo ka dhashay monsoon xagaaga.
Waa dhif iyo naadir in dabaysha ganacsiga ay dhaliso hirar waaweyn. Si kastaba ha noqotee, duufaannada kulaylaha waxay abuuraan hirar xoog leh oo qaab aan caadi ahayn. Mawjadaha intiisa badan ee lagu arko gobollada ku-meel-gaadhka ah waxay ka soo jeedaan gobollada latitude sare waxayna ku faafaan si xor ah kumanaan kilomitir.
Gobollada ay inta jeer ee dabayluhu ka sareeyaan soo saaraan mowjado dhaqdhaqaaq iyo cabbir weyn leh. Suunka duufaanka koonfureed waa aagga awood u leh inuu soo saaro mowjadaha ugu waaweyn, tan iyo markii la duubo dabeylaha ugu xoogan uguna adkeysiga badan.
Qaybo ka mid ah mowjadaha
In kasta oo aan ognahay dhaqdhaqaaqa bararka iyo sida ay u shaqeyso ee la xiriira xawaaraha iyo jihada dabaysha, halkaas kuma joogsan karno. Markii mawjad abuurto, waxay u qaybsan tahay dhowr qaybood.
Weli khad biyood
Khadkani wuxuu u dhigmaa heerka badda marka ma saameyneyso hirarka. Kani waa xariiqa loo tixraacayo badda muddo dheer si markaa, markii ay hirarku dhacaan, dhererka hirarka la kordhin karo lagana dhimi karo cabirkaas. Khadkan biyaha ah ee wali taagan waxaa lagu calaamadeeyay bartamaha mawjadaha-biyaha qoto-dheer waxayna ku yaalliin hoose marka mowjadaha ay xeebta yihiin.
Crest ee mawjadda
Waxaa laga yaabaa in tani ay tahay qaybta ugu wada yaqaan. Waa barta ugu sareysa ee mowjadda. Waxay caan ku tahay badmaaxayaasha waxaana lagu aqoonsan yahay biyaha cad iyo xumbada ka dhalata marka mowjaddu bilaabanto inay foorarsato oo ay dhacdo.
Waa ka soo horjeedka carada mawjada. Waa barta ugu hooseysa. Si loo arko, barta ugu hooseysa ee u dhaxeysa labada mowjadood waa in la fiiriyaa.
Dhererka badanaa waxaa lagu jahwareeraa crest. Si kastaba ha noqotee, dhererka mawjaddu waa farqiga u dhexeeya kala-goynta iyo dooxada. Waa maxay masaafadaas cabbirkeedu yahay dhererka mawjadda.
Ma waxaad cabirtaa fogaanta jiifka ah ee u dhaxeysa laba hirar. Cabbirka waxaa lagu sameyn karaa inta udhaxeysa ciriiriga iyo jilbaha ama dooxada iyo dooxada.
Muddada mowjaddu waa tan cabirta waqtiga dhaca inta udhaxeysa hal mowjad iyo mid kale. Cabirkan waxaa lagu sameeyaa iyadoo la doorto bar go'an oo la xisaabiyo waqtiga ay ku qaadaneyso culeyska mowjadda inuu u gudbo casharka labaad. Waqtigaan sidoo kale waxaa laga qiyaasaa dooxada ilaa dooxada.
Joogtayntu xoogaa ayey la mid tahay xilliga, laakiin waxay ku kala duwan tahay oo keliya inay qiyaasto wadarta tirada hirarka ee ka gudbaya barta tixraaca halbeegga waqtiga.
Ballaaran waa masaafada udhaxeysa qadka biyaha ee wali taagan iyo carada mowjadda. Waxaad dhihi kartaa waa dhererka dhexda mowjadda.
Taariikhda oo dhan waxaa jiray mowjado waawayn oo waxyeello baaxad leh geystay. Laakiin sidee loo sameeyaa mawjad weyn?
Noocyada hirarka noocan ah si ay u samaysmaan, waxaa loo baahan yahay dabayl xoog leh si loo abuuro dhaqdhaqaaqa dusha sare ee badda iyo qaab-dhismeedka badda oo ku filan. Hadday baddu leedahay niyad jab dhawr kiiloo mitir ah (sida madfaca oo kale) mawjaddu waxay awood u yeelan doontaa inay xeebta ku gaarto xooggeeda oo dhan, maaddaama ay si dhib yar u lumineyso awoodda sababo la xiriira isqabqabsiga joogtada ah ee salka.
Sidan oo kale, hirar waawayn ayaa la soo saari karaa kuwaas oo caqabad ku noqda kuwa jecel hirarka.
Macluumaadkan waxaad ku baran kartaa wax yar oo dheeraad ah oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa baddaheenna iyo baddeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Barar, qaybo ka mid ah hirarka, iyo hirarka waaweyn
Angelica Baraf dijo
Maaddada ay wadaagaan waa mid aad u wanaagsan oo waxtar badanna ay leedahay in la baro maxaa yeelay waxay hayaan macluumaad, sawirro iyo qoraalkooda waa la fahmi karaa qof kasta oo wax akhriya.
Ku jawaab Angelica Snow
Ku jawaab enefpxuyuy